မြန်မာနိုင်ငံရေးအခင်းအကျဉ်းနဲ့ ရှေ့အလားအလာ ~ Nge Naing
Saturday, September 17, 2011 Nge Naing 33 comments
September 17, 2011 at 8:33 PM Reply
ကိုယ်တိုင်ရေး ပို့စ်အသစ် မတင်ဖြစ်ဖူးနော်
ဝါရင့် ဘလော့ဂါ ကိုပေါ ဆီက ပိုစ့်တွေကို
September 18, 2011 at 9:33 AM Reply
ကိုပေါ ဆီမှာ တပည့်ခံလိုက်ပါ
သူက မငယ်နိုင်ထက် ဘလော့လောကမှာ စီနီယာ အများကြီးကျပါတယ်
မငယ်နိုင်ကို ကိုပေါ က အများကြီး သင်ပေးနိုင်ပါတယ်
မငယ်နိုင်က လေးလေးစားစား နားထောင်ဖို့တော့လိုတာပေါ့
September 18, 2011 at 9:36 AM Reply
ကျွန်တော်. ပိုစ့်ကို ဆရာလွဏ်းဆွေဆီမှာ
September 18, 2011 at 10:30 AM Reply
နိုင်ငံတွင် အပြောင်းအလဲသည် ပြည်သူလူထုက အုံကြွပြီး ပြောင်းလဲမှု့ဖြစ်နိုင်သလို သွေးထွက်သံယိုမှု့မရှိဘဲ အုပ်စိုးသူလူတန်းစား ပြောင်းလဲမှု့ ရပ်၍ ပြောင်းလဲမှု့လဲရှိသည်။
ဥပမာ-တရုတ်ကွန်မြူနစ် အစိုးရ၏ စီးပွါးရေးပြောင်းလဲမှု့၊ ဂျပန်ဘုရင် မေဂျီ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု့၊ ထိုင်းဘုရင် ချုလာလောင်ဂေါင်၏ ပြောင်းလဲမှု့၊ ဦးနေ၀င်း၏ မအောင်မြင်သော တပါတီမှ ပါတီစုံသို့ပြောင်းလဲမှု့၊ သက်ဦးဆံပိုင် ဘုရင်စနစ်မှ ဘုရင်ကိုယ်တိုင် စည်းမျဉ်းခံ ဘုရင်စနစ်သို့ပြောင်းလဲမှု့စသည်တို့ဖြစ်သည်။
သို့သော်လည်း ထိုသို့ အုပ်စိုးသူလူတန်းစားက ပြုလုပ်သောပြောင်းလဲမှု့သည် သွေးထွက်သံယို မရှိသော်လည်း သူတို့ရပ်တည်မှု့ရရှိရေး အတွက် အမြဲတမ်းထွက်ပေါက် တကွက်ထား ရှိလေသည်။
(တရုတ်ပြည်ကြီးသည် ပြောင်းလဲမှု့ကြောင့် ချမ်းသာ လာသော်လည်း ကွန်မြူနစ် အစိုးရ ဆက်လက်ရပ် တည်နေခြင်း၊ ဂျပန်ဘုရင်မေဂျီကြောင့် အနောက်နိုင်ငံများနှင့် တန်းတူရင်ဘောင်တန်း လာနိုင်သော်လည်း ဘုရင်စနစ် ဆက်လက် ရှိနေခြင်း။) ရာနှုန်းပြည့်ပြောင်းလဲမှု့ မရှိစေကာမူ တိုင်းပြည်အတွက်မည်မျှအကျိုးရှိ၊ ကောင်းကျိုး၊ဆိုးကျိုးတို့ကို လေ့လာပြီး လောလောဆယ်လက်ခံသင့်လျှင် လက်ခံရမည်ဖြစ်ပါသည်။
-ထိုသို့မဟုတ်ဘဲ လုံးဝရာခိုင်နှုန်းပြည့်ပြောင်းလဲမှု့ကိုလိုလားလျှင် ပေးဆပ်ရင်းနှီးရမှု့ကြီးမားပြီး ဆုံးရှုံးမှု့လည်း ဖြစ်နိုင်ပြီး အုပ်စိုးသူလူတန်းစားကလည်း သူတို့ရပ်တည်မှု့ အတွက်ပြန်လည်ရင်ဆိုင်ပြီး ဖိနှိပ်သော အုပ်စိုးသူလူတန်းစား အဖြစ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိ သွားနိုင်သလို တိုင်းပြည်သည် လည်း ဒုံရင်း ဘက်သို့ ပြန်ဖြစ်သွားနိုင်ပါသည်။
ဥပမာ-တရုတ်ပြည်တွင် လုံးဝကွန်မြူနစ်အစိုးရကို ဖြုတ်ကျလိုခြင်း၊ ဂျပန်ဘုရင်ခံစနစ်ကိုချုပ်ငြိမ်းလိုခြင်း၊
We must know that to get 100% is impossible.Now,Daw Su is going to get even 40%40%.60% is for general"s safety outlet.
If u want to get 100%,go to jungle and fight them.
September 18, 2011 at 9:22 PM Reply
ကျွန်မ ဘလော့ဂ်ရေးဖြစ်တာ ဆရာမမေငြိမ်း၊ ဆရာယောဟန်အောင်၊ လင်းလက်ကြယ်စင်၊ ကိုပေါတို့ ဘလော့ဂ်တွေကို စဖတ်မိလို့ ဘလော့ဂ်ရေးချင်စိတ်ပေါ်လာပြီး ရေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ အပေါ်က နှစ်ယောက် ပြောတာ နောက်တောင်နောက်ကျနေပြီ၊ ဘလော့ဂ်ဖွင့်တာ အခုဆိုရင် နှစ်နှစ်တောင် ကျော်နေပြီ။ သူ့ဆီမှာကျွန်မဘလော့ဂ် Link ရှိသလို ကျွန်မဆီမှာလည်း သူ့ဘလော့ဂ် Link ရှိပြီးသားဆိုတော့ ပြန်ဖေါ်ပြစရာမလိုအောင်ကို ပြည့်စုံနေပါတယ်။
ချင်းများ စာမတတ်သဖြင့် ကြံ့ဖွတ်ပါတီက ရာသက်ပန် အုပ်ချုပ်မည်ဟု မောင်ဦး ပြော (၁) says:
September 19, 2011 at 12:04 PM Reply
"ချင်းတွေဟာ ဘာစာမှ မတတ်ဘူး။ ဝန်ကြီးပေးလို့ ရမှာလား။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဘယ်တော့မှ အာဏာ မစွန့်လွှတ်ဘူး။ ရာသက်ပန် အုပ်ချုပ်မှာပဲ။
စာတွေ မဖတ်ကြဘူးလား၊ ဘယ်တော့မှမရဘူး။ ခင်ဗျားတို့ ရခိုင်တွေဟာ လူမျိုးစွဲ ဒေသစွဲတွေ ရှိနေကြတယ်။ သီးခြား သမ္မတနိုင်ငံ ထူထောင်လို့တော့ မရဘူး၊ ရခိုင်တွေ ၂ သန်းခွဲလောက်ရှိတယ်၊ ကျန်တဲ့ သန်း ၆၀ ကိုတော့ ဆန့်ကျင်လို့ မရဘူး။"
၁၄. ၅. ၂၀၁၁ ရက်နေ့
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရခိုင်ပြည်နယ် တာဝန်ခံ ယခင် ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဟောင်း နှင့် ရခိုင်တိုင်းမှူးဟောင်း ဦးမောင်ဦးသည် ၁၄. ၅.၂၀၁၁ နေ့တွင် ပေါက်တောမြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီး မြို့မိ မြို့ဖများ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကို ဖိတ်ကြားပြီး ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
ချင်းများ စာမတတ်သဖြင့် ကြံ့ဖွတ်ပါတီက ရာသက်ပန် အုပ်ချုပ်မည်ဟု မောင်ဦး ပြော (၂) says:
တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားတွင် ဦးမောင်ဦး ပြောကြားချက်
နိုင်ငံတော်ရဲ့အာဏာကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီမှ ဘယ်တော့မှ မစွန့်လွှတ်ဘူး။ ရာသက်ပန် အုပ်ချုပ်မှာပဲ။
ချင်းများ စာမတတ်သဖြင့် ကြံ့ဖွတ်ပါတီက ရာသက်ပန် အုပ်ချုပ်မည်ဟု မောင်ဦး ပြော (၃) says:
September 19, 2011 at 12:08 PM Reply
ချင်းတွေဟာ ဘာစာမှ မတတ်ဘူး။ ဘာဘွဲ့မှလည်း မရဘူး။ ဘာနိုင်ငံရေးမှ မသိဘဲနှင့် ဝန်ကြီးပေးလို့ ရမှာလား။
ချင်းများ စာမတတ်သဖြင့် ကြံ့ဖွတ်ပါတီက ရာသက်ပန် အုပ်ချုပ်မည်ဟု မောင်ဦး ပြော (၄) says:
(၎င်းနေ့ (၁၄. ၅. ၂၀၁၁ ရက်နေ့) တွေ့ဆုံပွဲတွင် မောင်ဦးသည် ကြံ့ခိုင်ရေး ပါတီဝတ်စုံကို ၀တ်ဆင်ထားပြီး အခမ်းအနား တက်ရောက် လာသူများကို လက်ညိုးထိုးပြီးမေးမြန်း ပြောဆိုခဲ့သည်။)
၀န်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံစဉ်အတွင်း "ဒီနေ့တက်ရောက်လာတဲ့ လူတွေထဲမှာ ဗမာလူမျိုး ဘယ်နှစ်ယောက် ပါသလဲ" ဆိုပြီး မေးမြန်းသည်။
မြန်မာစီးပွားရေးဘဏ်မှ မန်နေဂျာ ဦးရွှေကြိုင်အား "ခင်ဗျား ကုလားလူမျိုး မဟုတ်ဘူးလား" လို့ မေးမြန်းသည်။ ဦးရွှေကြိုင်က မိမိ ရခိုင်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ရသည်။
တချိန်တည်းမှာပဲ အဲဒီ အပြောင်းအလဲအတွက် မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုတွေ ရှိတယ်လို့ ပြောပြီး အခုအချိန်ဟာ အလွန်သိမ်မွေ့တဲ့ အဆင့်တခုမှာ ရောက်နေပြီလို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောပါတယ်။ ညှိနှိုင်းကြတဲ့ နေရာမှာ ကိုယ့်ဘက်က ရလိုတာသက်သက် မကြည့်ရဘဲ တဘက်ရဲ့ လိုလားချက်ကိုလည်း ပေးရတဲ့အပိုင်း ရှိတယ်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပြောသွားပါတယ်။
အပြောင်းအလဲတော့မြင်နေပြီ။ ဒေါ်စုက 40% ရလဲရသလောက်ယူမှာပဲ။ ကျန်တဲ့ 60%ကသူတို့လုံခြုံမှု့အတွက်ထွက်ပေါက်ပေးရမယ်။ ဒါတောင်အဖိုးကြီးပေးလို့ရတာ။ မပေးရင်ဒေါ်စုဘာမှမလုပ်တက်တော့ဘူး။ ရှေ့ဆက်ပြီင်္းသေသည့်တိုင်အောင်စကားပြောပါရစေလို့ဆက်အော်နေအုံးမှာပဲ။ ဘာမှမလုပ်တက်တော့လို့သူပြောတဲ့စကားကိုသာကြည့်တော့။
September 25, 2011 at 9:35 AM Reply
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ်ကနေ ၂၀၁၁ အထိ သူမရဲ့ အနစ်နာခံမှု၊ ပေးဆပ်မှု၊ စွန့်လွှတ်မှုတွေနဲ့ မြန်မာ့ ဒီမိုကရေစီ လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု အချိန်မှာတော့ သူ့ရဲ့ ထိုးထွင်း ကြံဆမှု၊ အမျှော်အမြင်ရှိမှု၊ အသိပညာ ကြွယ်ဝမှုများနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ကနေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပေါ်ပေါက်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်ရမယ့် အဆင့်သစ်ကို ရောက်ခဲ့ပါပြီ။ နှစ်ဘက်ကြား သဘော တူညီချက်ရဖို့ ဆိုတာ နှစ်ဘက်လုံးက အလျှော့ပေး လိုက်လျော ရတာတွေ ရှိမှာပါ။ ဒါမှလည်း သူမနာ ကိုယ်မနာ ဖြေရှင်းရေး Win - Win Solution ကို ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့်ဘက်က အပေးအယူ လုပ်ရတဲ့အခါမှာ မိမိ အဖွဲ့အစည်း တွင်းကပဲ ပေါ်ပေါက် လာနိုင်တဲ့ ဆန့်ကျင် ခုခံမှုများကို ကျော်လွှားဖို့ အတွက်ကတော့ မန်ဒဲလားရဲ့ အတွေ့အကြုံများဟာ အကောင်းဆုံး သင်ခန်းစာများ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။
whatever it is,u r the mother of Democracy.u must do vote decision in party.
She said i have responsible what i do.If i made mistake,thats my fault.
If u do mistake,country has to pay for that.Not u.
ပြည်တော်ပြန်သူများ လိုက်နာရမည့် အချက်များ (ကတိခံဝန်လွှာ ပုံစံ) says:
September 26, 2011 at 4:10 PM Reply
မူရင်း စကင် (scan) ကို ကြည့်ရန် ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။
သိန်းစိန် ရုပ်သေးအစိုးရက မစားရ ဝခမန်း ပြောနေတဲ့ ဒီမိုကရေစီဟာ စစ်မှန်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ မဟုတ်ဘဲ "ရွှေရည်စိမ် ဒီမိုကရေစီ" ("ဟန်ပြ ဒီမိုကရေစီ") သာ ဖြစ်တယ် ဆိုတာကို သက်သေပြတဲ့ သတင်းတပုဒ်ကို ဒီမှာ ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ပြည်တော်ပြန်လိုသူတို့ စဉ်းစားကြဖို့ သံရုံးကစာ
၁။ နိုင်ငံတော်သည် ပြည်ပသို့ ရောက်ရှိနေသည့် နိုင်ငံသားများ မိမိတို့နိုင်ငံတွင် မိသားစုများနှင့်အတူ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်စေရေးအတွက် ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာကြရန် ၁၇-၈-၂ဝ၁၁ ရက်နေ့က ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါသည်။
၂။ ထိုသို့ နိုင်ငံတော်က သဘောထားကြီးစွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် နည်းတူ ပြည်ပမှ မိမိတို့နိုင်ငံသို့ ပြန်လည် ဝင်ရောက်လာသူများကလည်း နိုင်ငံတော်အပေါ် ပြန်လည် ကျေးဇူး တုံ့ပြန်သင့်သည့် အားလျော်စွာ အောက်ပါအချက်များကို လိုက်နာရမည် ဖြစ်ပါသည်။
(က) နိုင်ငံတော်အား အကြည်အညို ပျက်စေသည့် အပြုအမူနှင့် ပြောဆိုမှုများကို ရှောင်ကျဉ်ရန်။
(ခ) နိုင်ငံတော်၏ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုကို ထိခိုက်စေမည့် လုပ်ဆောင်မှု၊ လှုံ့ဆော်ပြောဆိုမှု၊ ရေးသားဖြန့်ဝေမှုများ မပြုလုပ်ရန်။
(ဂ) တရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း မပြုရန်။
(ဃ) အဖျက်အမှောက်လုပ်ရပ်များ ရှောင်ရှားရန်။
(င) နိုင်ငံတော်၏ ကျေးဇူးသစ္စာကို စောင့်သိ၍ ဥပဒေဘောင်အတွင်း အေးချမ်းစွာ နေထိုင်ရန်။
၃။ သို့ပါ၍ အထက်ဖေါ်ပြပါအချက်များကို လေးစားစွာ လိုက်နာ နေထိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်း အောက်တွင် ဝန်ခံကတိ လက်မှတ်ရေးထိုးအပ်ပါသည်။
နေ့စွဲ၊ - - ၂ဝ၁၁ ။
(အညာနွေတမာမြေ မှ ကူးယူ ဖော်ပြပါသည်။)
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ၄ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဝါရောင် တီရှပ်ဝတ် ပြည်သူ ၂၀၀ ခန့် ရန်ကုန်တွင် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော် (၁) says:
Monday, 26 September 2011 16:31
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ၄ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အဝါရောင် တီရှပ်ဝတ် ပြည်သူ ၂၀၀ ခန့် ရန်ကုန်တွင် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒထုတ်ဖော် (၂) says:
September 28, 2011 at 5:01 PM Reply
(ဧရာဝတီ မှ ကူးယူ ဖော်ပြသည်။)
ရွှေဝါရောင် ၄ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်သည့် လူထု လှုပ်ရှားမှုကို စော်ကားမော်ကား ပြောဆိုရေးသားသည့်အတွက် စာဖတ်သူ ပြည် သူလူထု အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်နေကြသည့် Eleven Media Group ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှ သတင်းတပုဒ် says:
September 28, 2011 at 5:05 PM Reply
ရွှေဝါရောင် ၄ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်သည့် လူထု လှုပ်ရှားမှုကို စော်ကားမော်ကား ပြောဆိုရေးသားသည့်အတွက် စာဖတ်သူ ပြည် သူလူထု အကြီးအကျယ် ဒေါသထွက်နေကြသည့် Eleven Media Group ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်မှ သတင်းတပုဒ်
Eleven Media Group ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် အရပ်သားအစိုးရ အမည်ခံ စစ်အုပ်စု အလိုကျ တင်ပြထားပုံ says:
September 28, 2011 at 5:26 PM Reply
"လူ ၂၀၀ ခန့်ပါသော ဆန္ဒပြမှု တစ်ခုဖြစ်ပွား၊ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့ရေးကို ပျက်ပြားစေသော အနှောက်အယှက် လုပ်ဆောင်မှုဖြစ်ပြီး လက်မခံကြောင်း သတင်းစာ ဆရာကြီးများနှင့် လူများစု ပြောကြား"
ဆိုပြီး ရွှေဝါရောင် ၄ နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ငြိမ်းချမ်းစွာ ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်သည့် ပြည်သူများကို စော်ကားသော အရေးအသားဖြင့် Eleven Media Group ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် အရပ်သားအစိုးရ အမည်ခံ စစ်အုပ်စု အလိုကျ တင်ပြထားပုံ
(Eleven Media Group ၏ CEO ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် စကား စကား၊ ပြောပါများ၊ စကားထဲက ဇာတိပြလာပုံ)
သန်းထွဋ်အောင် (Eleven Media Group) က ပြည်သူတွေကို စော်ကားထားတာပါ says:
ရွှေဝါရောင် ၄ နှစ်ပြည့် လမ်းလျှောက် ဆုတောင်းတာကို အလဲဗင်းမီဒီယာက ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင်က "လုံးဝ လက်မခံနိုင်ဘူး နောက်ကွယ်က ပြဿနာကို ဖေါ်ထုတ်ရမယ်" တဲ့။
"ချောင်းရေက သူ့ဘာသာ သူ နောက်တာပါဗျာ။ 'နင် မဟုတ်ရင် နင့်အဖေပဲ' လို့ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် အနေနဲ့ မပြောစေချင်ပါဘူး" says:
September 28, 2011 at 6:07 PM Reply
(ဦးဝင်းချို အင်တာဗျူး အပြည့်အစုံကို ဖတ်ရန် "ချောင်းရေက သူ့ဘာသာ သူ နောက်တာပါဗျာ။ 'နင် မဟုတ်ရင် နင့်အဖေပဲ' လို့ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် အနေနဲ့ မပြောစေချင်ပါဘူး" ခေါင်းစဉ်ကို နှိပ်ပါ။)
၂၆-၉-၂ဝ၁၁ ရက်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည့် ရွှေဝါရောင် လေးနှစ်ပြည့် လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သူများကို ဝေဖန်နေသည့်အပေါ် မိမိတို့ စေတနာသန့်သန့်နှင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့တာ ဖြစ်ကြောင်း လှုပ်ရှားမှုကို ဦးဆောင်ပါဝင်ခဲ့သူ တဦးလည်းဖြစ်၊ ၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်ခဲ့သည့် တသီးပုဂ္ဂလ ဦးဝင်းချိုကဆိုသည်။ ယင်းလှုပ်ရှားမှုကို လုံခြုံရေးနှင့် ရဲဝန်ထမ်း ၄ဝဝ ခန့်က လူစုခွဲပစ်ခဲ့သည်။
“ကျနော်တို့ ချောင်းရေက သူ့ဘာသာ သူနောက်တာပါဗျာ။
ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် အနေနဲ့ ငြိမ်းချမ်းစွာ ၀တ်ပြုဆုတောင်းပွဲ ပြုလုပ်တဲ့ ပြည်သူတွေကို 'နင် မဟုတ်ရင် နင့်အဖေပဲ' လို့တော့ ("ဝံပလွေ နဲ့ သိုးငယ်" အီစွပ်ပုံပြင်ထဲက ဝံပလွေက သိုးငယ်ကို ကောက်ကျစ်ယုတ်မာတဲ့ နည်းနဲ့ အပြစ်
ပေးဖို့၊ အပြစ်ပုံချဖို့ အကြောင်းပြချက်ကောင်း ရအောင် အပြစ်မရှိ အပြစ်ရှာပြီး ပြောသလို) မပြောစေချင်ဘူး။
ကျနော်တို့ ရေသောက်ဆင်းမိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီချောင်းရေ နောက်သွားတယ်။ 'ကျနော် မဟုတ်ပါဘူး' ဆိုရင်တောင် 'နင် မဟုတ်ရင် နင့်အဖေပဲ' လို့ ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် အနေနဲ့ ဖြစ်နိုင်ရင် မပြောစေချင်ပါဘူး။”
"ကြက်တူရွေး (သိန်းစိန် အစိုးရ) က တော်တော်၊ မယ်ဘော် (သန်းထွဋ်အောင်) က ကဲနေလိုက်တာ" says:
September 28, 2011 at 6:22 PM Reply
"ကြက်တူရွေး (သိန်းစိန် အစိုးရ) က တော်တော်၊ မယ်ဘော် (သန်းထွဋ်အောင်) က ကဲနေလိုက်တာ"
ဒေါက်တာသန်းထွဋ်အောင် သို့ --
"တိုင်းပြည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်ရင် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေး နှောင့်နှေးသွားမယ် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေအရေး နှောင့်နှေးသွားမယ်" ဆိုတဲ့ ဒီစကားက အုပ်စိုးသူတွေ ဖန်တရာတေအောင် ပြောနေတဲ့စကားပဲ။ ခင်ဗျားက အစိုးရ ‘ကလုံး’ မို့ ဒီစကားမျိုးပြောရတာ လား။ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ဒီကိစ္စကို ဘာမှ လေသံမဟသေးဘူး။ ခင်ဗျားတို့က စကားဦးသန်းနေတယ်။ မယ်ဘော်က ကဲပြနေသလို ဖြစ် နေတယ်။
တိုင်းပြည် မတည်မငြိမ်ဖြစ်ရတာ၊ ဒီမိုကရေစီအရေး နှောင့်နှေးနေရတာတွေဟာ ဒီလို ဆန္ဒပြမှုတွေကြောင့်လားတဲ့လား။
(EMG) ထုတ်ဝေခွင့်ရေးသားခွင့်တွေ ရခဲ့တာ ခင်ဗျားတစ်ဦးချင်းတော်မှု၊ တတ်မှုတွေကြောင့်လား။ (နအဖ) စစ်အစိုးရက စိတ်၊ စေတနာကောင်းမွန်စွာနဲ့ ခွင့်ပြုချက်ပေးသနားခဲ့လို့လား။
ဒါမှမဟုတ် လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့ အညတရတွေရဲ့ လမ်းမပေါ်က တိုက်ပွဲတွေကြောင့်လား။ ခင်ဗျား စဉ်း စဉ်းစားစားပြောပါဦး။
ခင်ဗျားအပြောက အစိုးရကြည်ဖြူအောင်နေ၊ ရုတ်ရုတ် ရုတ်ရုတ်မလုပ်နဲ့ဆိုတဲ့ သဘောဖြစ်နေတယ်။ အစိုးရငြိုငြင် သွားမှာကို တော်တော်အစိုးရိမ်ကြီးနေပုံရတယ်။
အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဝတ်ပြုဆုတောင်းမှု လုပ်ရပ်ကောင်းဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆို says:
September 28, 2011 at 7:02 PM Reply
အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေး ဝတ်ပြုဆုတောင်းမှု လုပ်ရပ်ကောင်းဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောဆို
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲများ ကျင်းပနေမှုအပေါ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လုပ်ရပ်ကောင်းတစ်ခုအဖြစ် ရှုမြင်ကြောင်း The Voice Weekly သို့ ပြောကြားသည်။
စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ရွှေဂုံတိုင်ရှိ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရုံးတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် တည်ထောင်ခြင်း ၂၃ နှစ်မြောက် အခမ်းအနားအပြီး The Voice Weekly က ရန်ကုန်မြို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနှင့် မည်သို့ မှတ်ချက်ပေး ရှုမြင်ပါသနည်းဟု မေးမြန်းရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က လုပ်ရပ်ကောင်းအဖြစ် ရှုမြင်ကြောင်း ပြောကြားခြင်း ဖြစ်သည်။
" ကောင်းဖို့အတွက် ဆုတောင်းတာ ကောင်းတာပေါ့။ အဓိက စေတနာနဲ့ အားလုံးရဲ့ ကောင်းကျိုးအတွက် ဆုတောင်းတာပဲ " ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဝတ်ပြုဆုတောင်းပွဲများနှင့် ပတ်သက်သော သူ၏အမြင်ကို ထုတ်ဖော် ပြောဆိုသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွတ်မြောက်ရေးအတွက် ဆုတောင်းပွဲများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်နေပြီး စက်တင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့က ဆူးလေ စေတီတော်တွင် လည်းကောင်း၊ စက်တင်ဘာလ ၂၇ ရက်နေ့က ရွှေတိဂုံ စေတီတော်တွင်လည်းကောင်း နှစ်ရက်ဆက်တိုက် ဖြစ်ပေါ်လျက် ရှိသည်။
" ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် စစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးနေတာနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ဆိမ်ဆိမ် နေရမယ် ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး၊ ဘာမှ ငြိမ်စရာ မရှိဘူး" လို့ဦးဝင်းတင် ပြော says:
September 28, 2011 at 7:13 PM Reply
ကျနော့်သဘောထား ကျနော် ရှင်းရှင်းပြောရရင်တော့ " ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဒီစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးနေတာနဲ့ငြိမ်ငြိမ်ဆိမ်ဆိမ် နေရမယ် ဆိုတာ မဟုတ်ဘူး" လို့ကျနော်ယူဆတယ်။
ဘာမှ ငြိမ်စရာ မရှိဘူး။ ဘာဖြစ်လို့ လဲဆိုတော့ ဒီလို မငြိမ်မသက်ဖြစ်ရတဲ့ကိစ္စတွေက အစိုးရက လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေကို မလုပ်လို့မငြိမ်မဆိမ် ဖြစ်နေတာကိုး။
လွှတ်ရမယ့်အချိန်မှာ မလွှတ်ဘူး။ နိူင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ လွှတ်မပေးဘူး ဆိုတဲ့အခါကျတော့ မငြိမ်မဆိမ်ဖြစ်နေမှာ ပေါ့။ တောင်းဆိုကြမှာပေါ့။ မိသားစုတွေ၊ လိုလားတဲ့ လူတွေကတော့ ပြောကြဆိုကြမှာပေါ့ဗျာ. ဒါပဲပေါ့။
အဲဒါကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဆွေးနွေးနေတဲ့ အတွက်ဆိုပြီးတော့ မလိုလားဘူး ဆိုတာတော့ ..အဲဒါတော့ မမှန်ဘူးလို့ ကျနော် ထင်တယ်။
ကျပ်မပြည့်ကျော်ဆန်းနဲ့ ပေါင်းစားပြီး ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေ လျှောက်ပြောနေတဲ့ အလဲဗင်း သန်းထွဋ်အောင်တော့ အရှက် အကြီးအကျယ် ကွဲပြီ။
ကလိန်ကကျစ် အတွင်းစိတ်တွေ အကုန်ပေါ်ပြီ။
တံတားက ရွေ့တာ မဟုတ်ဘူး၊ နင့်စိတ်က ရွေ့တာ (၁) says:
October 8, 2011 at 5:16 PM Reply
တံတားက ရွေ့တာ မဟုတ်ဘူး၊ နင့်စိတ်က ရွေ့တာ (၁)
နေ့သစ် - ကိုမိုးသီးခင်ဗျား အခုတလော ဦးသိန်းစိန် ဘောင်ဘီချွတ်အစိုးရဟာ အရင်နဲ့မတူ၊ တမူထူးတယ်။ ပြောင်းလာ ပြီလို့ပြောနေကြတယ်။ တနေ့က အလဲဗင်းဂျာနယ်မှာ ဒီဖက်က ဧရာဝတီဂျာနယ်က ကိုအောင်ဇော်နဲ့ အင်တာဗျူးတွေကို ဖေါ်ပြထားတယ် စသဖြင့် စသဖြင့် ပြောနေကြ သုံးသပ်နေကြတာ ရှိတယ်။ နောက် ဗီအိုအေသတင်းထောက်တဦး၊ ဘီ ဘီစီ သတင်းထောက်တဦးကိုလဲ ၀င်ခွင့်ပေး အင်တာဗျူးတွေ ပေးနေတာတွေရှိတော့ ဒါဟာပြောင်းလဲမှုရဲ့အစလို့ ပြော လို့ရမလား။ ခင်ဗျား ဘယ်လိုမြင်သလဲ..
ငယ်ငယ်က တံတားပေါ်ကနေ ရေကန်ထဲကို ကြည့်လိုက်သလိုပေါ့။ ရေလှိုင်းလှုပ်ပြီး ကိုယ်အရိပ်ကရွေ့သွားတော့ ဟော.. တံတားကြီးသွားနေတယ်လို့ အော်ကြတယ်။ ပျော်ကြတယ်။ တကယ်က တံတားကရွေ့သွားတာမှ မဟုတ်တာ။ ပြောင်းလဲသွားတာမှ မဟုတ်တာ။ ကိုယ်က Optical Delusion - အမြင်မှားသွားတာ။ တံတားရွေ့တာမဟုတ် ကိုယ်အ ရိတ်က ရွေ့သွားတာ။
စစ်အုပ်စုက မပြောင်းလဲပါဘူး။ ကိုယ်က ပြောင်းလဲနေတာ။ ကိုယ်သမာဓိတွေ၊ သီလတွေ ချို့ယွင်းနေတာ။ ညောင်သီး လဲစား လေးသမားလဲကြည့်လို့ သတိပေးချင်တယ်။ တခါတလေတော့လဲ နင် အ လို့ နင်ခံရတာလို့ ပြောချင်ပေမယ့် အော်.. အသက်တချောင်း ကယ်ကောင်းပါတယ်လို့ သူတော်ကောင်းတရားကပဲ ကိုယ်မှာဝင်လာတော့လဲ။ သတိသမ္ပဇဉ် ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ ပြောချင်တာကတော့ စစ်အုပ်စုဟာ ဘောင်းဘီချွတ်လိုက်၊ ပုဆိုးဝတ်လိုက်လုပ်တာ နှစ်ခါရှိပြီ။ ၇၄ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးပြီး မှာတခါ၊ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေရေးပြီးမှာတခါ ( ၂၀၁၀) မှာတခါ။ ၁၉၆၂ စစ်တပ်ကနေ အာဏာသိမ်းက တည်းက ကနေ့အထိ မပြောင်းလဲသေးဘူး။ သူတို့ဖက်ကတော့ လုံးဝမပြောင်းလဲသေးဘူး။ ဦးနေ၀င်း တုန်းက ဒီ့ထက် တောင် အိုင်တင်ကောင်းသေးတယ်။
၃၃ ဦးအကြံပေး ကော်မတီကိုတောင်ဖွဲ့ ပေးလိုက်သေးတယ်။ ခုလို ခွေးလှေးကြမ်းပိုး၊အုတ်ကြားမြက်ပေါက်တွေနဲ့ ဖွဲ့ထား တာမဟုတ်ဘူး။ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း ဦးနု တို့လို ဒိတ်တွေနဲ့ဖွဲ့ထားပေးတာ။
တံတားက ရွေ့တာ မဟုတ်ဘူး၊ နင့်စိတ်က ရွေ့တာ (၂) says:
October 8, 2011 at 5:18 PM Reply
တံတားက ရွေ့တာ မဟုတ်ဘူး၊ နင့်စိတ်က ရွေ့တာ (၂)
လွတ်လပ်မှုမရှိသေးဘူး။ စီးပွားရေးမှာ လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားတာကမပြောင်သေးဘူး။ နိုင်ငံတော်အာဏာ ခွဲဝေပုံကို မ ပြောင်းလဲသေးဘူး။ သူတို့ဖါသာသူတို့ တဖက်သတ်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့တဲ့ ၁၉၇၄ အခြေခံဥပဒေကိုရော ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို ရော သူတို့ မကျင့်သုံးပုံတွေ မပြောင်းလဲသေးဘူး။ ချစားမှုတွေ၊ လူအခွင့်အရေးချိုးဖေါက်မှုတွေ မပြောင်းလဲသေးဘူး။ ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းရေပေါ်လစီ မပြောင်းလဲသေးဘူး။ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ မလွတ်သေးဘူး။ နိုင်ငံခြားရေးမှာ တရုတ်ကိုယိမ်း ပေါ်လစီကမပြောင်းသေးဘူး။
နောက်တခု ပဋိပက္ခကြီးမှာ သူကိုလဲ ကိုယ်ကကြည့်တာပဲ။ သူကလဲ ကိုယ်ဘက်ကို ကြည့်တာပဲ။ ဘယ်ကောင်ကို စားလို့ ရမလဲလို့ လုပ်ကြရတယ်။ စားလို့ အလားအလာရှိနိုင်တဲ့ကောင်တွေကို တွက်ရသကွဲ့၊ ချက်ရသကွဲ့။ ဒို့ဘက်ကလည်း သူ တို့ထဲက ဘယ်ကောင်တွေကို ခွေလို့ရနိုင်မလဲ စားလို့ရနိုင်မလဲ။ ကိုယ်လိုခြင်တဲ့ပုံကိုဖေါ်ပေးရသကွဲ့။ ဒါဟာ ပဋိပက္ခမှာ ပရိယာယ်ဝေဝုစ်တွေကိုး။ ဘုရင်နောင်ကျော်ထင်နော်ရထာက အယုဒ္ဒယ ( Ayutthaya) ဘုရင် ချာကရာဖတ် (Chakkraphat) ကို မလုပ်ကြံခင်မှာ ပစ္စနုလုပ်မြို့စား သမာရာချာ (Thammarach) ကို ဆွဲစေ့ထားရသလိုပေါ့။ အပြန်အ လှန်အားဖြင့် သူတို့လဲ ကိုယ်ဖက်ကို ကြည့်မပေါ့။ ကိုယ်ဖက်က သာခွေယိုင်နေတဲ့သူတွေ၊ သီလ၊ သမာဓိ ချွတ်ချော်နေ တဲ့ သူတွေ သူတို့လဲ ကြားမပေါ့။ မြင်မပေါ့။ ဒီတော့ စားဖို့ကြံသပေါ့။ သတိပြုပါလေ။
သူတို့ဖက်က မပြောင်းလဲဘူး။ အဲသိသိသာသာ ပြောင်းလဲလာတာတော့ ကိုယ်လူတွေပဲ။ ငါသွားနိုင်တာ၊ ငါစကားကို ဖေါ် တာကို ပြောင်းလဲမှုသင်္ကေတ (Signal of Change) လို့ မဟစ်ကြွေးကောင်းဘူးကွဲ့။ ဒကာကြီး ကျော်သန်းပြောတဲ့ ပဉ္စနရစ် ပုံပြင်က မွှားလို ဖြစ်တတ်တယ်။
တံတားကြီးသွားနေပြီကွလို့ အော်နေရင် အရူးလို့ပဲ ထင်မယ်။
အနုမာန မရင့်သန်သေးချိန်မှာ ဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်ကြတယ်။ ပါရမီရင့်သန်ကြ။ သီလ၊ သမာဓိမှာ ပညာဟာအဓိကပဲ။ ဥာဏ် ပညာအရာမှာ လှိုင်းတံပိုးကဲ့သို့ ထနိုင်ပါစေလို့ ဝေနေယျတွေကို ဒီကနေ မေတ္တာပို့ပါတယ်။
October 8, 2011 at 6:53 PM Reply
“တံတား ရွေ့တာမဟုတ်၊ နင့်စိတ်က ရွေ့တာ ...”
ကိုမိုးသီးဇွန် ကို မကြိုက်တဲ့ လူတွေ အနေနဲ့ ကိုမီးသီးဇွန် ပြောတဲ့ အခု စကားက မှန်နေတာကို ပုဂိုလ်စွဲ အရ တိုက်ခိုက်ချင်လို့ တိုက်ခိုက်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါဘူး.. အေးအေးဆေးဆေး စဉ်းစားပြီးမှ မှတ်ချက် ရေးသင့်ပါတယ်..
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ် ၅ဝ လုံးလုံးမှာ စစ်အုပ်စုက ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲတွေ လုပ်ပြ တာ အပါအဝင် ပြည်သူတွေအပေါ်မှာ ကောင်းတာ လုပ်ပြသလိုလိုနဲ့ နောက်ကျတော့ ဒုံရင်းက ဒုံရင်း ပြန်ပြန်ဖြစ်သွားပြိး ၁၉၈၈ မှာ လမ်းပေါ်မှာ လူ ၃ဝဝဝ ကျော် သတ်သလို ၂ဝဝ၇ မှာလဲ လမ်းပေါ်မှာ လူ ၁ဝဝ ကျော် ဆက်သတ်လာတာ၊ ၂ဝဝ၃ မှာလဲ ဒီပဲယင်းမှာ နိုင်ငံတော်လုပ်င်္ကြမှု လုပ်ပြီး လူ ၁ဝဝ ကျော် သတ်ခဲ့တာ၊ ၁၉၉၈ မှာ လက်နက်မဲ့ အရပ်သား ၈၁ ယောက်ကို တနင်္သာရီတိုင်း၊ ခရစ်စတီကျွန်းပေါ်မှာ အစုအပြုံလိုက်သတ်ပစ်ခဲ့တာ၊
အခုလဲ တိုင်းရင်းသားနယ်မြေတွေမှာ စစ်ဆင်ရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး အပြစ်မဲ့၊ လက်နက်မဲ့ အရပ်သားတွေကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ဆက်သတ်နေတာ တွေကို လွယ်လွယ်နဲ့ မေ့ပစ်လိုက်လို့ မဖြစ်ပါဘူး..
"အဲဒါတွေ လုပ်လာတာက အရင် နအဖ အစိုးရ လက်ထက်ကလေ" ဆိုပြီး ငြင်းလို့ မရပါဘူး.. အခု အစိုးရအသစ် ဆိုတာက နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အရပ်သားအယောင်ဆောင် အစိုးရသာ ဖြစ်ပါတယ်.. ပြည်သူတွေနဲ့ နိုင်ငံတကာကို လှည့်စားပြီး လုပ်ပြနေတဲ့ ရွှေရည်စိမ် ဒီမိုကရေစီကို မမြင်ဖူး မူးမြစ်ထင် နေစရာ မလိုပါဘူး..
မြစ်ဆုံရေကာတာ ရပ်ပေးလိုက်တယ် ဆိုတာက မြန်မာပြည်မှာ အာရပ်နိုင်ငံတွေမှာလို ပြည်လုံးကျွတ် လူထုတော်လှန်ရေးတွေ ဖြစ်လာမှာကို ကြောက်လို့ လောလောဆယ်မှာ ခဏ ရပ်ပြ ထားတာ .. အပြီး ဖျက်လိုက်တာမှ မဟုတ်တာ.. တရုတ်ဆီက လာဘ်ငွေတွေ တနင့်တပိုး ယူထားပြီးနေတော့ အပြီးအပိုင် ရပ်ပစ်လိုက်လို့လဲ မရဘူး.. လူတွေ မေ့လောက်တဲ့ အချိန်ကျရင် မသိမသာနဲ့ ပြန်ပြီး ခိုးလုပ်ဦးမှာပဲ..
ပြောင်းလဲနေပါပြီ၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကို ဦးတည်နေပါပြီ ဆိုတာသာ အမှန်ဆိုရင် နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကို ဘာမှ ဆက်ဖမ်းထားစရာ အကြောင်းမရှိဘူး..
အစိုးရဌာနပေါင်းစုံမှာ အကြီးအကျယ် လာဘ်စားနေတာ၊ ခိုးနေတာတွေလဲ အရင်လို ဆက် ဖြစ်နေတုန်းပါပဲ..
လူအစုအပြုံလိုက် သတ်မှု၊ လူသတ်မှု အပေါအဝင် သေဒဏ်ထိုက်တဲ့ ရာဇဝတ်မှုကြီးတွေ၊ ပြည်တွင်းစစ် နနာမည်သို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး လက်နက်မဲ့ အရပ်သားတွေကို လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှု၊ ရွာမီးရှို့မှု၊ လုယက်မှု၊ ခိုးမှု ဆိုတဲ့ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေ၊ ပြည်သူ့ငွေကို ဒေါ်လာ သန်းပေါင်း ထောင်နဲ့ ချီပြိး ခိုးမှု၊ လာဘ်စားမှု .......... တွေအတွက် တာဝန်ရှိတဲ့ နအဖ စစ်အုပ်စု ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အစိုးရအသစ်ဟာ ရာဇဝတ်မှု၊ စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ တရားရုံးတင် စစ်ဆေးခံရမယ့် လူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် တရားဝင်အစိုးရ လို့ သတ်မှတ်လို့ မရပါဘူး..
ပြောင်းချင်ယောင်ဆောင်နေတာ မဟုတ်ဘဲ တကယ် ကောင်းအောင် ပြောင်းနေတာတောင်မှ အခု အရပ်သားအစိုးရ အမည်ခံ နအဖ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေဟာ အစိုးရရာထူးတွေကို ယူခွင့် မရှိတဲ့ ရာဇဝတ်ကောင်တွေ၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေသာ ဖြစ်ပါတယ်..
ဒီလောက် ရှင်းနေတဲ့ အချက်ကို နားမလည်ဘဲ ထင်ရာတွေ ရေးပြီး "သမတကြီး ဦးသိန်းစိန် ကို ကြိုဆိုပါတယ်" ... လို့ ရေးနေသူတွေကတော့ ပြည်သူတွေကို ထာဝရ စစ်ကျွန် ဖြစ်အောင် ဝါးကူထိုးပေးနေတဲ့ စစ်အုပ်စု ဒလံတွေ၊ ကိုယ့်လူ သူ့ဘက်သားတွေ၊ အစိုးရက ပြောင်းနေပါတယ် လို့ အကြောင်းပြပြီး အစိုးရသစ်နဲ့ ပေါင်းပြီး ဂွင်ဆင်ဖို့ ကြံနေသူတွေ၊ အရောင်ပြောင်း ပုတ်သင်ညိုတွေ၊ ခံယူချက် မခိုင်မာသူတွေ၊
ရာဇဝတ်ကောင်တွေ၊ စစ်ရာဇဝတ်ကောင်တွေကို အားပေးအားမြှောက် လုပ်နေသူတွေ၊ ဦးနှောက်မဲ့သူတွေသာ ဖြစ်ပါတယ်..
January 3, 2014 at 11:35 AM Reply
January 4, 2014 at 2:24 PM Reply
January 4, 2014 at 2:53 PM Reply
January 4, 2014 at 4:04 PM Reply
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - အဲဒီလို ဟိုလိုလို၊ ဒီလိုလို ပြောတာကို အမေက လုံးဝ မကြိုက်ဘူး။ ခပ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲ ပြောတာ ကြိုက်တယ်။